आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति? (सूचीसहित)
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ ।
यस्तै, युरो एकको खरिददर १३९ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आजको विनिमयदरः कति छ डलरदेखि रियालसम्मको भाउ? (सूचीसहित)
यसैगरी, पाउण्ड एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ।
यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ । र, युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ ।